Ogaden News Agency (ONA) – Wiil Kamid Ah Qaxootiga Kusugan Sweden oo Haweenay Mindi Ku Dilay.
Wiil Kamid Ah Qaxootiga Kusugan Sweden oo Haweenay Mindi Ku Dilay.
Posted by Dayr	/ January 27, 2016
Mid kamid ah qaxootiga iska dhiibay dalka Sweden ayaa Isniintii mindi ku dilay haweenay kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya xeryaha Qaxootiga ee wadanka Sweden.
Dilkan ayaa ka dhacay xerada qaxootiga ee Mölndal waxaana la sheegay in haweenaydan ay u dhimatay dhaawacyadii kasoo gaadhay mindi uu ku dhuftay wiil dhalinyaro ah oo kamid ah qaxootiga halkaasi lagu hayo.
Booliiska Sweden ayaa diiday inuu xiligan shaaciyo Wadanka uu kasoo jeedo wiilkan qaxootiga ah ee dilka gaystay, waxayna sheegeen inay baadhitaan wadaan. Wiilka gacan ku dhiiglaha ah ayaa waxaa la sheegay inay qabteen dadkii qaxootiga ahaa ee xerada kujiray kahor intaan booliiska goobtaasi gaadhin.
Waxaa xusid mudan in bishii Agoosto ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale nin asal ahaan kasoo jeeda wadanka Eriteria u dhashay uu mindi ku dilay labo qof oo ku sugnaa dukaanka weyn ee IKEA. Ninkaasi dilka gaystay ayaa la sheegay in dowlada ay u diiday sharciga.
Wadanka Sweden oo shacabkiisa lagu qiyaaso inay gaarayaan 9.8 milyan oo qof ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee 2015, waxaa gaadhay qaxooti tiradooda kor u dhaaftay 160.000 (boqol iyo lixdan kun).
Sweden oo horay loogu yiqiinay dalalka ugu soo dhawaynta fiican ee Midowga Yurub ayaa dhamaadkii sanadkii tagay sheegtay in xeryahooda qaxootiga ay buuxsameen isla markaana aysan qaabili karin qaxooti kale. Waxayna sheegtay in qaxootiga hada ku sugan gudaha wadankaasi aysan heysan goobo ku filan ooy seexdaan.
Talaabooyinka dawlada Sweden qaaday ayaa waxaa kamid ahaa inay adkaysay xuduuda ay la wadaagto dalka Denmark ooy uga soo gudbaan inta badan qaxootiga soomara dalalka Giriiga iyo Germany.
Dhinaca kale waxaa wadanka Sweden bilihii lasoo dhaafay kusoo badanayay cadaawada iyo nacaybka ay shacabka Swedishku u muujinayaan dadka soo galootiga ah, waxaana jiray weeraro lagu qaaday xarumaha ay ku jiraan dadka qaxootiga ah ama soo galootiga ah ooy ku jiraan masaajida.